Berlin n'ime ụbọchị atọ | Akụkọ Njem
Bọchị atọ bụ ezigbo ọnụọgụ iji mara obodo, opekata mpe oge mbụ. Mgbe anyị na-eme atụmatụ ileta ọtụtụ obodo ma ọ bụ ọtụtụ mba, na Europe ndị niile dị nso, ụbọchị atọ na-abụkarị oge anyị nyefere ndị isi obodo.
O doro anya na ọtụtụ ga-ahụ na ọ pere mpe na ndị ọzọ na ọ dị mkpa ma dịkwa mkpa. N'ikwu eziokwu, ụbọchị atọ adịchaghị ogologo, mana ọ na-enye anyị ohere ileba anya na ebe kachasị mkpa ma ọ bụ ebe ndị njem nleta iji hụ ma ọ bara uru ịlaghachi maka oge ọzọ. Ya mere, ka anyị lee ihe anyị nwere ike Ga-esi mara Berlin na ụbọchị atọ.
2 Ihe ị ga-ahụ na Berlin
Ikwesiri ima na Berlin ọ bụ obodo nke abụọ kacha biri na Europe n’azụ London, nke ihe karịrị nde mmadụ atọ na ọkara bi. Ọ dị na mgbago ugwu ọwụwa anyanwụ nke obodo ahụ n'akụkụ mmiri nke osimiri Havel na Spree.
O nwere ọtụtụ narị afọ gara aga ma amaara ya na etiti obodo, ala-eze, nke mba na nke doro anya, nke ọchịchị Reich nke atọ. Ọzọkwa, ruo iri afọ ole na ole, ọ ghọwo obodo kewara n'etiti usoro echiche abụọ, nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke akụ na ụba: ọchịchị Kọmunist na ikeketeorie. Dịkwa ka a ga-asị na nke ahụ ezughi mgbe ọdịda nke mgbidi ahụ gasịrị, ọ bụrịrị obi nke mba ahụ n'oge njikọta, na-egosi nlọghachi nke Germany dị ka ike ọrụ ọrụ ọ bụ taa.
Berlin nwere oge oyi, mgbe ụfọdụ na a ogo n'okpuru efu, na oyi na-atụ dịruru ruo mgbe mmiri na snow ada n'etiti December na March. Nchịkọta, n'aka nke ọzọ, anaghị adị ọkụ ma nkezi okpomọkụ anaghị eru 30 ºC.
Anyị kwuru na anyị nwere ụbọchị atọ ịgagharị na obodo, Awa 72. Mgbe ahụ ọ ga-adaba adaba ịmara tupu ihe anyị masịrị anyị. Ọ na-amasị anyị ụlọ ngosi ihe mgbe ochie, veranda nka, saịtị akụkọ ihe mere eme, ejiji, gastronomy…? Ma ọ bụrụ na anyị adịghị ekpebi, anyị nwere ike ime a potpourri ebe njedebe na mmasi ịtụ ihe niile dị nso ma ọ bụ pere mpe.
Dịka ọmụmaatụ, nke ụbọchị mbụ Anyị nwere ike ịga na Ọnụ ụzọ Branderburg, Ememe Ncheta nke ndị Juu Egburu Egbu na Europe, Fuhrer's bonka, Potsdamer Square, Topography of Terror exhibition and the Checkpoint Charlie, post ndị agha.
Ọnụ zọ Brandmá Brandenburg: e wuru ya n’agbata 1788 na 1791 ma buru ulo mbu na revival Grik na obodo. Ọ bụ onye na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ aha ya bụ Carl Gotthard Langhans wuru ya onye rụrụ ọrụ na ụlọ ikpe Prussia ma bụrụ nke sitere n'ike mmụọ nsọ nke nnukwu Acropolis na Athens wuru ya. Nwere Ogologo 26 dị elu na mita 65 nwere ogwe abụọ nke ogidi Doric isii buru ibu ma sie ike. Na 1793, ha dowere ụgbọ ịnyịnya ahụ, nke ahụ mgbe Napoleon banyere n'obodo ahụ ọ kpọọrọ gaa Paris dị ka ihe nkwata nke ọ laghachiri naanị na 1814. Na nkewa nke Germany mgbe Agha IIwa nke Abụọ gasịrị, Ọnụ Gatezọ Brandmá Brandenburg nọrọ n'akụkụ ndị Soviet na mgbe ewuru mgbidi ahụ na 1961 a hapụrụ ya n'ime mpaghara mwepu ka ọtụtụ iri afọ ghara inwe onye ga-eleta ya. E mere ya n’ihu ọha ọzọ na 1989.
Ememe Ncheta maka ndị Juu nwụrụ anwụ na Europe- Sọpụrụ nde ndị Juu gburu mmadụ isii na nnabata bụ n'efu. Enwere nnukwu ngosipụta na etiti ozi. Ọ dị na Cora-Berliner-strasse, 1.
Uche Hitler: bonka dị n'agbata Potsdamer Square na Ọnụ Brazọ Bramá Branderburg na taa na saịtị ahụ enwere ụlọ site na 80s site na oge Soviet. N'oge ehihie enwere njem nleta na-ahapụ site na ebe a na-adọba ụgbọala n'okpuru nke bụ ọnụ ụzọ mbata nke bonka ọ bụ ezie na ọ gaghị ekwe omume ịbanye. Ọ bụrụ na-amasị gị bunkers mgbe ahụ na obodo ahụ enwere ndị ọzọ enwere ike ịga leta.
Ogige Potsdamer: Ọ bụ otu n'ime n'ámá ọha kacha mkpa na Berlin ma ọ dị otu kilomita site na Ọnụ-ụzọ Branderburg. A na - akpọ ya aha obodo Potsdam na ọ dịbu, na mbido narị afọ nke XNUMX, otu n’ime ebe kachasị ekwo ekwo na isi obodo German.
Topography nke ụjọ: a na-eleta ihe ngosi a nke ukwuu. Ọ bụ ihe dị mkpa Akwụkwọ Center nke ahụ na-eme ka o doo anya ihe niile emere na ọchịchị nazm. Ebe a n'oge ahụ isi ụlọ ọrụ nke ndị uwe ojii nzuzo nke steeti, ndị SS, na Officelọ Ọrụ Nche. Ihe ngosi na-adịgide adịgide na-emekọ nke a, ọ bụ ezie na enwere ihe ngosi ndị ọzọ na-adịru nwa oge. Ọ dị na Niederkirchnerstrasse, 8. Ọ na-emepe elekere iri nke ụtụtụ ruo elekere asatọ nke elekere na nnabata bụ n'efu.
Ihe nlere Charlie: ọ bụ ọkwa ndị agha kewara East Berlin na West Berlin n'oge Agha Nzuzo. Mgbe ejikọtasịrị obere ụlọ ahụ ghọrọ ebe ndị njem nlegharị anya ma taa ọ dị na Allied Museum na mpaghara Dahlem, ebe ọ bụ na a kpaliri ya na saịtị mbụ ị ga-ahụ naanị otu akara.
El ụbọchị nke abụọ anyị nwere ike ịga na Museum nke Island, na Berlin TV Tower, Alexanderplatz, na Soviet War Memorial, na Oberbaumbrucke Bridge na East Gallery.
Ochie Museum: bu aha enyere ndi ugwu ugwu nke agwaetiti na osimiri Spree. Lee ọtụtụ ngosi nka nke ndi otu mba na ebe 1999 ka a na-eleba anya na ngalaba a Ihe Nketa Worldwa.
TVlọ Elu TV nke Berlin: Ọ nwere 368 mita elu na ụbọchị site na 1969. Ọ bụ saịtị a gara nke ọma ka enwere ike ịnwe ọtụtụ mmadụ na-eche ịrịgo. Echiche dị oke mma, nwekwa otu kafe dị n'ụlọ elu, nke na-agba okirikiri oge ọkara ọ bụla. Ọ dị nso na Alexanderplatz.
Ememe Ncheta Soviet- Ọ bụ na Treptower Park, nke dị n’etiti ya, ma wuru ya mgbe WWII gasịrị ma nwee ụlọ ili nke ndị agha Soviet 500.
Oberbaumbrucke Bridge: Ọ bụ ihe gbasara a Ugboro okpukpu abụọ n’elu mmiri Spree na ọ bụ akara nke Berlin. N'oge Soviet ọ bụ ókè dị n'etiti abụọ na mgbe ejikọtara ya, eweghachiri ya ma tinye ngalaba ọhụrụ nke onye ama ama na Spanish bụ Santiago Calatrava rụpụtara.
Osimiri East: ihe foduru na mgbidi Berlin, akụkụ nke kachasị ogologo na nnukwu oghere ikuku n'uwa nwere ihe karịrị 100 murals tinyere ogologo kilomita dị ogologo nke na-aga n'akụkụ Osimiri Spree.
Ndien ke akpatre ụbọchị atọ na Berlin Ọ bụ oge nke Column Victory na Tiegarten Park, Kaisen Wilhelm Memorial Church na ụlọ Reichstag.
Reichstag: ọ bụ nzuko omeiwu nke German na nwere ike ịga leta na ndebanye aha tupu oge eruo. E nwere akụkọ ihe mere eme ngosi na a oge a iko dome na teres na a ubi na ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ. Na njegharị Ha ji ọkara otu elekere ma na Bekee, Italiantali na French. Ngosipụta a na-emeghe Tuesday site na Sunday site na 10 ruo 6 elekere.
Kọlụm Mmeri na Ogige Tiergarten: ogige a na-ewu ewu na Berlin ma nwee 210 hekta na ọtụtụ narị afọ nke akụkọ ihe mere eme. N'akụkụ ya, Akwụkwọ Mmeri sitere na narị afọ nke XNUMX wee na-echeta mmeri Prussia na Agha Prussia na Danish. Nwere a oche ndoziỌ na-eji polite na-acha uhie uhie na-egbu maramara ma nwee ụlọ nzukọ nwere ogidi na ogwe aka mara mma nke mosaics na ọla kọpa. Na mbu ọ dị n'ihu Reichstag mana emesia ebugara ya na Tiergarten ma eleghị anya nke ahụ zọpụtara ya site na bọmbụ ahụ.
Na saịtị ndị a dị mkpa ị nwere ike otu ụbọchị tinye nleta Katidral St Hedwig, Berliner Dom na ọmarịcha ahịa Hackescher. O doro anya na ị nwere ike ịdebanye aha maka njem nlegharị anya ma ọ bụ njem igwe kwụ otu ebe na-atọ ụtọ nke ukwuu. Enwere ọbụna gastronomic, ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwale ihe ụtọ ọhụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Berlin » Berlin n'ime ụbọchị atọ